Conferize: Usatombopotsa Musangano | Martech Zone
Muvhuro, September 16, 2013 Chishanu, June 8, 2018 Douglas Karr
Zvinoita kunge svondo rega rega vhiki ndinogomera pandinosuwa mumwe musangano wekuti shamwari dzangu dziri kutaura kana kuenda. Hazvina kuita senge handiedze kuramba…
Conferize ndinotarisira kuchinja izvo neteki Usambofa Wakarasikirwa Mumwe Musangano.
Vakaburitsa Manifesto pane yavo saiti, 10 nzvimbo matinogona kugadzirisa musangano:
Kutsvaga pamhepo pamisangano inokanganisa. Zvimwe chete kana iwe ukaedza kusefa mhedzisiro zvichienderana nenzvimbo, kufarira, mutauro uye nguva. Icho chikamu chese chehupenyu uko kutsvaga kwakundikana.
Panguva ino chaiyo iwe ungangove kupotsa musangano mukuru kumwe uye iwe hautozive. Tinoda zvirinani masystem ekushingairira kuti tirambe tiri muchiuno. Panzvimbo pekutsvaga maconferensi misangano yakakodzera inofanirwa kutiwana.
Most musangano mawebhusaiti zvinoita kuti tinzwe sekunge gore ra1999, uye zvakadaro hazvina kumbobvira zvakave nyore kugadzira rakakura mushandisi zviitiko online. Isu tinobhara sei iri rinooneka gaka pakati pevarongi nehunyanzvi?
Nediki nguva uye mari inowanikwa kune wepakati mushandi zvinoreva kuti tinowanzo kumanikidzwa kupfuudza kumisangano isu tinonyatsoda kuenda. Asi isu tingaite sei nemazvo kutora chikamu mumusangano pasina kuvapo? Nekufambira mberi mukubatana kure izvi zvinogona kuitika nhasi.
Zvakanyanya kuoma kuwana kuwana ruzivo yakaburitswa ndokuburitswa kumusangano. Iwe uchawana zvidimbu uye zvidimbu zvakapararira kutenderera pawebhu, pasocial network, mumabhokisi emuma inbox uye pane akaomarara madhiraivha. Asi iwe unowana kupi mufananidzo uzere uye uwane izvo zvauri kunyatsotsvaga?
Mutsika yedu yakadzidza mukana wekuti munhu mumwechete achiziva kudarika huwandu hwevanhu mazana maviri huri kuita hudiki zuva rega rega. Tingaite sei kushandisa tekinoroji ku gohwo huchenjeri pamwe chete wepfungwa dzese dzakanaka dzinopinda musangano wako unotevera?
Nhasi kazhinji hauzive ndiani arikuenda kumusangano kusvikira iwe uripo chaizvo. Uye mushure memusangano iwe unowanzo kutadza kuyananiswa nemumwe munhu wawasangana naye. Zvirokwazvo panofanira kuve neimwe nzira iri nani.
Kune vanhu vazhinji zvinogona kunetsa kungofamba uchienda kune vausingazive uye kutanga kutaura. Sei tisingakwanise kuve nehurongwa munzvimbo yatinokwanisa tanga hurukuro musangano usati waitwa, woenderera mberi kumusangano uye kunyangwe zvapera?
Kunyangwe patinenge tiripo panyama chikamu chedu chengwariro chinogara chakazvipira kuhupenyu hwedu online. Isu tinoshandura sei izvi kuita chinhu chakanaka munzvimbo yemusangano? Uye isu tinoita sei gadzira chirevo mudhijitari ruzha izvo zvinowanzoita kunge zvinodzikisira mamiriro ekudzidza kwakadzama?
Musangano unobudirira riini? Tinoyera sei iyo kukanganisa kwechokwadi kwemusangano, zvese zvevarongi, maspika, nzvimbo nenzvimbo? Kune madhora ese anoshandiswa pamusangano isu tinofanirwa kuziva iyo net kudzoka.
Sign up uye nditevere pa Conferize saka kuti ndizive misangano yamuri kuenda, munoziva kwandiri kutaura, uye tinokwanisa kusangana!
Tags: musangano networkconferizetsvaga musanganomusangano wekushambadzirapasocial network
ZoomInfo: Chengeta Yako B2B Dhata Yakagadziridzwa
Sep 19, 2013 pa 7: 16 AM
Mhoro Douglas - yakanaka posvo uye nekutenda nekutora kufarira! Ramba Uri PEDYO.